Ahlsunna iyo Kheyre oo kala saxiixanaya heshiis ku aadan…. – Shabakadda Somalibile Media
Ahlsunna iyo Kheyre oo kala saxiixanaya heshiis ku aadan….
Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre iyo urur diimeedka Ahlunna Waljameeca ayaa lagu wadaa inay magaalada Dhuusa mareeb ee gobolka Galgaduud ku kala saxiixdaan heshiis ku aadan in ciidamada Ahlusunna ay ka mid noqdaan kuwa dowladda Federaalka Soomaaliya.
Kheyre oo hadda ku sugan deegaanada Xeraale iyo Huurse ayaa lagu wadaa in maalmaha soo socda uu dib ugu laabto magaalada Dhuusa mareeb si heshiiskaas qalinka loogu wada duugo, sida ay xogta warkani inoo sheegeen xubno ka tirsan maamulka Galmudug kuna sugan magaalada Dhuusa mareeb.
Sidoo kale Kheyre ayaa doonaya in Ahlusunna waljameeca kala heshiiyo in magaalooyinka Dhuusa mareeb iyo Guriceel la geeyo ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Federaalka Soomaaliya si ay deegaanada maamulkaasi kala qeyb qaataan xaqiijinta Amaanka Galmudug.